Xildhibaanada BF oo loo soo bandhigayo isla xisaabtankii lala yeeshay Hay’adaha amniga | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xildhibaanada BF oo loo soo bandhigayo isla xisaabtankii lala yeeshay Hay’adaha amniga
Xildhibaanada BF oo loo soo bandhigayo isla xisaabtankii lala yeeshay Hay’adaha amniga
Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay Xildhibaanada horgeynayaan kulamadii ay la qaateen Hay’addaha ammaanka ee dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in Xildhibaanada ay ka doodayaan go’aana ay ka gaaraan qodobadii ka soo baxay kulamadii isla xisaabtanka ahaa oo ay la qaateen Saraakiisha Hay’addaha ammaanka.
Xoghayaha Guud ee Guddiga difaaca Golaha Shacabka Sadiiq Warfaa oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay maalmihii dambe ay kulamo gaar gaar ah la qaateen Saraakiisha Hay’addaha amaanka isla markaana ay kulaxisaabtameen qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
Waxa uu tilmaamay in guddigooda shaqadooda ay tahay isla xisaabtan iyo in ay Hay’addaha amaanka kula xisaabtamaan amaanka dalka, isaga oo sidoo kale xusay in qaraxyadii dhacay oo ay dadka badan ku dhinteen muhiim ay tahay in lagula xisaabtamo dadkii ka dambeeyay waxna la iska weydiiyo sababta ay ku dhaceen.
Guddiga difaaca iyo Guddiga amniga ee golaha Shacabka ayaa qaraxii ka dhacay Isgooyska Soobe 14-kii bishii hore waxa ay bilaabeen kulamo isla xisaabtan ay ugu magac dareen oo ay la qaadanaayeen Hay’addaha ammaanka ee dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana sida uu qorshaha uu yahay natiijada ka soo baxay kulamadaasi la horgeynayaan Xildhibaanada golaha shacaabka si ay kaga doodaan go’aana kaga gaaraan.